IKE SMART CITY, LLC (“annaga”, “annaga”, “keenna”) waxay ixtiraamaan asturnaantaada oo ay ka go’an tahay inay ilaaliso iyada oo u hoggaansamid sida aan u hoggaansameyno qaanuunkan.
Nidaamkani wuxuu qeexayaa noocyada macluumaadka aan kaa soo aruurin karno ama inaad bixiso markaad booqanayso Kiosk (“Kiosk”) iyo habdhaqankeena loo ururinayo, isticmaalka, dayactirka, ilaalinta, iyo bixinta macluumaadkaas.
Fadlan u akhri qaanuunkan si taxaddar leh si aad u fahamto qaanuunkeena iyo dhaqamada ku saabsan macluumaadkaaga iyo sida aan yeeli lahayn. Haddii aadan ku raacsaneyn qaanuunkeena iyo ficilladeena, xulashadaada waxaa waaye inaad isticmaalin Kiosks. Adiga oo helaya ama isticmaalaya Kiosk, waxaad ku raacsan tahay qaanuunka sirta ah. Qaanuunkani way isbeddeli kartaa marba mar. Isticmaalka Kiosk ee sii socota ka dib markaan sameyno isbedel ayaa loo arkaa in ay tahay isbedel aqbalin, markaa fadlan si joogta ah u hubi qaanuun cusbooneysinta.
Xogta Isticmaalaha ee uu soo aruurshay Kiosk
Qaar badan oo ka mid ah sifooyinka, adeegyada iyo macluumaadka laga heli karo Kiosk waxaa si qarsooni ku heli karaa adiga adigoon u baahnayn inaad bixiso macluumaad ku saabsan naftaada. Kiosk waxay ururinaysaa macluumaad ku saabsan wada-shaqeeynta qarsooni ah oo isticmalaha kasta iyo Kiosk, sida sifooyinka, adeegga iyo macluumaadka inta badan la isticmaalo iyo sida loo isticmaalo, markaa waxaanu hagaajin karnaa heerka Kiosk iyo waayo-aragnimadaada Kiosk. Waxaan xogtaan la wadaagi karnaa degmada ayadoo aysan yirin wax xanibaado ah meesha dukaan yaruhu ku yaalo iyo wakaaladaha, booqo Berkeley iyo iskaashatadeena tignooloojiyada.
TQaybaha soo socda ee lagu baxsho Kiosk ayaa ah kuwo isdhexgal ah: (a) 311; (b) Get Around; (c) Photo Booth; iyo (d) Survey Says. Si aad u gasho qaybahaan isdhexgalka ah, Kiosk ayaa soo bootinaaya meesha aad marinayso iskaanka Koodhka QR adoo adeegsanaaya moobilkaaga. Koodhka QR-ku wuxuu si qarsoodi ah moobilkaaga ugu xirayaa applicationada. Haddii aalada moobilkaagu uusan awoodin galitaanka applicationada asagoo iskaan garaynaaya koodhka QR, waxaad gali kartaa qaybaha adoo bixinaaya xodka uu kaa codsato Kiosk ga, kuwaasoo qaarkood magacaaga ku jiri karo. Kiosk waxay ku weydiin doonaan oo keliya macluumaadka lagama maarmaanka u ah inay qabtaan adeegga aad codsato ayadoo lagu salaynaayo qaabka isdhexgalka ee aad doorato. Intaa waxaa dheer, Kiosk waxay kaliya ku kaydin doontaa macluumaadkaan muddo dheer ku filan si ay u qabato adeeggaas, iyo inta lagu jiro wakhtigaas, ma wadaagi doonno, iibinayno ama u siideyno macluumaadkaan dhinacyada saddexaad, iyada oo ku xiran wax kasta oo ka shaqeynaya Wada-hawlgalaha Saddexaad , sida ku qeexan cutubka soo socda. Taas ka dib, macluumaadka ma sii hayni doono Kiosk ama IKE.
Qaybaha soo socda ee isdhexgalka ah ee aalada Kiosk waxaa maamusha ama bixisa iskaashiga API(S ee, ama haddii kale u baahan xariirka iyo iskuxirka qolyaha sadexaad (“Iskaashade Shirkad sadexaad ka socda”), marka aad doorato ku shaqaynta qaybahaana, waxaad aqbalaysaa inaan siin karno xogta aad bixisay Kiosk, ayna ku jiraan xog kasta oo aqoonsi kaa bixin karta, siinaysana Qololada Sadexaad: (a) 311; (b) Get Around; iyo (c) Photo Booth. Qaab tusaale ah, qaabka 311 ayaa kuu sahlaaya inaad fariin u dirto magaalada aadna hesho xogihii ugu danbeeyay ee xaalada fariintaada. Markaad ku shaqaynayso qaabka 311, wuxuu kaliya kaa codsanayaa iimeelkaaga oo magaalada loo diraayo si aad u hesho xogihii ugu danbeeyay ee aad codsatay. Had iyo jeer waanu sheegi karnaa in qaabka isdhexgalka ee ay u shaqeyneyso Shirkadda howl-galaha saddexaad, shaacintani waxay si cad ugu muuqan doontaa shaashadda markaad doorato mid ka mid ah sifooyinkaas. Iyada oo la tixgelinayo wax kasta oo ay ku shaqeyneyso Wada-Shaqeeye Saddexaad, Kiosk waxay kaliya ku kaydin doontaa macluumaadka aad bixiso wakhti dheer oo ku filan si ey u qabato adeegga aad codsatay. Taas ka dib, IKE ama annaga ma sii hayn doono macluumadka, laakiin waxaa laga yaabaa wada-shaqeeye saddexaadka in uu sii hayo. Waxaanu kaliya macluumaadkaas la wadaagi doonna wada-shaqeeye saddexaad, annagana ma wadaagi doonno, iibinayno ama u siino macluumaadkaan cid kale oo saddexaad. Ma xakameyno xakamaynta lamaanaheena eh howl-galaha seddaxaad, waxaadna ku xirnaan doontaa qaanuunkooda iyo shuruudaha iyo xaaladaha marka aad la shaqeyneyso wax kasta oo ay ku shaqeyneyso howl-galaha Saddexaad. Sababtan awgeed, waxaan kugula talineynaa in aad dib u eegto siyaasadahooda iyo shuruudaha iyo shuruudaha ka hor inta aan la qabsanin wax kasta oo ay ku shaqeyneyso howl-galaha Saddexaad.
Kiosk kasta waxaa laga yaabaa in lagu qalabeeyo siinta adeegga wifi ee aaladaha shakhsi ahaaneed ee awood u leh inuu helo signal kuna yaal meel u dhaw Kiosk . Waxaan la shaqaynaynaa iskaashatada qolyaha sadexaad ah si ay noogu fududaato bixinta adeegyada Wi-Fi ga ee aan ku siinayno. Haddii aaladaada shaqsiga ah leedhay aalada Wi-Fi oo daaran, aaladaada shaqsiga ah ayaa xogta farsamada qaarkeed la wadaagi karta adeeg bixiyaha khadka interneetka dhammaan khadka Wi-Fi. Xogta farsamada ayaa kaliya noo furan anaga muddo laba iyo toban (12) bilood ah, taasoo intaas kadib la tiraayo aanaana mar danbe heli doonin. Ma kaysano waxyaabaha aad ka gashay baroowsarkaaga ama ma daba galno webseetyada aad booqato.
Kiosk kasta wuxuu yeelan karaa dareemayaasha deegaanka oo ururiya xogta ku dhow deegaanka Kiosk , sida tayada hawada. Dareemayaasha deegaanka ma soo aruurinayaan wax macluumaad ah oo adiga kugu saabsan. Waanu wadaageynaa xogtan iyada oo aan la xaddidnayn magaalada, lamaanayaasheena maxaliga ah iyo wada-hawlgalayaasha teknoolajiyada ama cid kale oo aan si macquul ah u aragno.
Mid kasta oo ka mid ah Kiosk waxaa lagu qalabeeyaa hal ama dhowr kamaradood. Kaamiradu waxay qabataa sawirada aagga ku wareegsan Kiosk, sawiradana waxaa ku jiri kara adiga. Ma xafideyno wax sawir ah kamarada qabatay muddo ka badan 15 maalmood, haddii aan sawirku muhiim yahay si loo baadho dhacdo dhacday ma ahayne. Intaa waxaa dheer, ma isticmaali doonno ama u bixinayno macluumaadka ay soo ururiyeen kamaradaheena marka laga reebo hagaajinta howlaha iyo hubinta amniga Kiosk, hadday lagama maarmaan noqoto si wax looga qabto hawlaha sharci darrada ah, la xirriirta ama lagu sameeyo Kiosk yada ama aaga ku xeeran, ama haddii aan rumaysanno in shaacinta sharciga ubaahanyahay ama ey tahay danta amniga dadweynaha. Ma adeegsan doono qalabka aqoonsada wajiga qofka.
Marka lagu daro shaac-bixinnada aan ku ogaanay meelo kale oo ka mid ah qaanuunkan, waxaa laga yaabaa inaan sidoo kale soo bandhigno wax kasta iyo dhammaan macluumaadka nagu soo ururiyey ama in aad naga siiso Kiosk sida lagu sharxay siyaasaddan waalidiinta, asxaabteena iyo asxaabteena, iyo / ama shaqaale, kaas oo macnaheedu yahay, qaar ama dhammaan hantida ama danaha lahaanshaha ee IKE Smart City, LLC.
Waxaan fulinay tallaabooyin loogu talagalay in lagu hubiyo macluumaad kasta oo aad na siisid iyada oo loo marayo Kiosk khasaare shil ah iyo ka soo galitaanka aan la oggolayn, isticmaalka, isbeddelka iyo shaacinta. Inkasta oo aanu samayno intii ugu fiicneyd si aan u ilaalino macluumaadkaaga, ma xaqiijin karno ammaanka macluumaadka aad naga siiso Kiosk.
Kiosk yada ma adeegsan karaan carruurta da’doodu ka hooseyso 13 sano mana ogaanno ama si ula kac ah u soo aruurineyno macluumaadka shakhsiyeed ee carruurta da’doodu ka hooseyso 13 sano. Haddii aad ka yartahay seddax iyo tobban sano, laguma ogola inaad soo gudbiso macluumaadka shakhsi ahaaneed ee lagu aqoonsan karo Waxaan u hoggaansamaynaa Sharciga ilaalinta asturnaanta caruurta ee internetka ee ku jira hawlgalkayaga Kiosks.
Isbadalada Xeerka Arimaha Shaqsiga ah
Waxa laga yaabaa inaan dib u cusbooneysiiyo Nidaamka Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah waqti ka waqti si loo muujiyo isbeddelka sharciga ku haboon. Sababtoo ah wixii macluumaad shakhsi ah ee aad na siisid lama kaydin ama lagu haynin xog annaga aan leenahay ama aan abuurnay, ma awoodi karno inaan ku ogeysiinno sida iyo goorta habkani la cusbooneysiinayo. Sidaa daraadeed, waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad booqato bogga qaanuunkan Khaaska ah si joogto ah si aad u aragto wixii cusbooneysiin ah.
Markii u danbaysay ee wax laga baday: Janaayo 16, 2020
Xeerarka Gaarka ah ee Gobalka
California: Wixii xog dheeraad ah oo ku saabsan xaquuqda loo asteeyay muwaadiniinta California ee ku cad Sharciga Macmiilka ee Arimaha Shaqsiga ah ee California, halkaan guji.
Si aad u weydiiso su’aasha ama u bixiso faallooyin ku saabsan qaanuunkan iyo habdhaqanka asturnaanta, nagala soo xiriir:
250 N Hartford Ave
xaquuqda Ku Cad Sharciga Asturnaanta ee Macmiilka California
Sharciga Macmiilka ee Arimaha Shaqsiga ah ee California (“CCPA”) wuxuu siiyaa dadka reer California xaquuq gaar ah oo la xariirta xogtooda shaqsiga ah. Qaybtaan waxay qeexaysaa xogta lagaa soo qaaday, waxay qeexaysaa xaquuqdaada CCPA ee ku xiran isticmaalkaaga iyo galitaankaaga aalada Kiosk, waxayna sharxaysaa sida aad u raacayso xaquuqdaada.
Sharciga CCPA wuxuu qeexayaa “xogta shaqsiga ah” inay tahay xog aqoonsanaysa, la xariirta, qeexaysa, tixraac ka bixinaysa, awooda inay xog ka bixiso qofka, ama ay suuragal tahay in qofka loo tiirsho, si toos ah ama dadban, kuna saabsan isticmaale ama aalad gaar ah. Markaad isticmaalayso Kiosk, waxaan aqbalaysaa inaad xog gaar ah oo shaqsi ah siinayso IKE. IKE ma beecin wax Xog Shaqsi ah oo la siiyay qolyo sadexaad 12 bilood ee lasoo dhaafay. IKE ma iibin doonto wax kamid ah xogtaada shaqsiga ah.
Qaybaha Xogta Shaqsiga ah ee ay Soo aruurinayso IKE
IKE waxay soo aruurisay qaybyada soo socda ee Xogta Shaqsiga ah oo ay ka aruuriso dadka adeeggeeda isticmaala laba iyo tobankii (12) bilood ee lasoo dhaafay:
Aqoonsadayaasha sida ciwaanka barotokoolka interneetka, ciwaanka galitaanka xogta, magaca aalada, nambarada taleefanada, ciwaanada iimeelka, ama aqoonsadayaasha kuwaas la midka ah. Kuwaan waxaa soo aruurinaysa shirkada Wi-Fi ga bixinaysa toos ayaana looga helayaa adeegsada.
Isticmaalka xogta oon ahayn xog qarsoodi ah ee isdhexgalka isticmaalaha iyo adeegsiga aalada Kiosk. Waxaa toos loogasoo qaadaa isticmaalaha marka macmiilku galo aalada Kiosk.
Xogta goobta qofka oo noqonaysa goobta rasmiga ah ee guud ee macmiilku joogo. Xogtaan si toos ah ayaa loogasoo qaadaa macmiilka.
Xogta wajiga ee qofka oo ku kooban sawirka wajiga macmiilka ee lagu qaado kaamirada Kiosk. Waxaa toos loogasoo qaadaa isticmaalaha marka kaamirada macmiilku daaran tahay.
Qaybyada Xogta Shaqsiga ah ee Lasiiyo Qolyaha Sadexaad
IKE waxay shaacisay, laakiin aysan iibin, qaybyada soo socda ee Xogta Shaqsiga ah oo ay ka aruuriso dadka adeeggeeda isticmaala ayna siisay qolyo sadexaad laba iyo tobankii (12) bilood ee lasoo dhaafay.
Aqoonsadayaasha sida ciwaanka barotokoolka interneetka, ciwaanka galitaanka xogta, magaca aalada, nambarada taleefanada, ciwaanada iimeelka, ama aqoonsadayaasha kuwaas la midka ah. Kuwaan waxaa soo aruurinaysa shirkada Wi-Fi ga bixinaysa toos ayaana looga helayaa adeegsada. Waxaa loosoo aruurshaa sababo ganacsi awgood si loo baxsho adeegga Wi-Fi ga iyo adeegyada kale ee la xariira.
Isticmaalka xogta oon ahayn xog qarsoodi ah ee isdhexgalka isticmaalaha iyo adeegsiga aalada Kiosk. Waxaa toos loogasoo qaadaa isticmaalaha marka macmiilku galo aalada Kiosk. Waxaa arintaan loo sameeyaa sababo ganacsi oo lagu hubinaayo ama kor loogu qaadaayo qaybaha Kiosk ga.
Xogta goobta qofka oo noqonaysa goobta rasmiga ah ee guud ee macmiilku joogo. Xogtaan si toos ah ayaa loogasoo qaadaa macmiilka. Waxaa arintaan loo sameeyaa sababo ganacsi oo lagu hubinaayo ama kor loogu qaadaayo qaybaha Kiosk ga.
Xogta wajiga ee qofka oo ku kooban sawirka wajiga macmiilka ee lagu qaado kaamirada Kiosk. Waxaa toos loogasoo qaadaa isticmaalaha marka kaamirada macmiilku daaran tahay. Waxaa xogtaan loo aruurshaa ujeedo ganacsi oo lagu samaynaayo adeegyada.
Xaqa aad U leedahay Barashada Xogtaada Shaqsiga ah ee La qaatay ama la Shaaciyay
Waxaan xaq u leenahay inaan samayno codsiga la xaqiijin karo ee isticmaalaha kaasoo IKE ay faafino qayb ka mid ah xogta oo ay adigga kusoo dirayso una saabsan aruurinteena iyo adeegsiga xogtaada shaqsiga ah ee laba iyo tobankii (12) bilood ee lasoo dhaafay. Markaad helno aana xaqiijino codsigaaga xaqiijinta ee adeegsadaha (arag Xaquuqda G
Qaybaha Xogta Shaqsiga ah ee kugu sabsan ee aan soo aruurinayno.
Qaybaha ilaha aan ka helayno Xogta Shaqsiga ah ee kugu sabsan ee aan soo aruurinayno.
Ujeedadeena ganacsi ama shaqo ee aruurinta ama iibinta xogtaas shaqsiga ah.
Qaybaha qolyaha sadexaad ee aan la wadaagno Xogtaas Shaqsiga ah.
Qaybaha gaarka ah ee Xogta Shaqsiga ah ee kugu sabsan ee aan soo aruurinayno.
Xaquuqda Codsiga Tirista Xogta Shaqsiga
Waxaad xaq u leedahay inaad samayso codsiga la xaqiijin karo ee macmiilka kaasoo ah in KE ay tirto Xogtaada Shaqsiga ah ee aan aruurinay ama aan hayno laba iyo tobanka (12) bilood ee soo socda.
Ku dhaqanka Xaquuqda Tirista iyo Galitaanka
Si aad u raacdo xaquuqda galitaanka iyo tirista ee kor lagu qeexay, fadlan gudbi codsiga la xaqiijin karo ee macmiilka noona soo dir adoo adeegsanaayo midkood:
Nagasoo wacaaya 614.294.4898; AMA
Codsiga iimeel ahaan ugusoo gudbinaaya ciwaanka privacy@ikesmartcity.com
Kaliya adigga, ama qof ka diiwaan gashan madaxa arimaha gobalka California oo awood u leh inu wakiil kaa noqdo, ayaa codsan kara codsiga la xaqiijin karo ee macmiilka ee la xariira Xogtaada shaqsiga ah. Waxaad sidoo kale ku gudbin kartaa codsiga la xaqiijin karo ee macmiilka adoo wakiil ka ah ilmahaaga yar.
Waxaad kaliya gudbin kartaa codsiga la xaqiijin karo ee macmiilka si aad u gasho laba jeer xogta laba iyo toban (2) bilood gudahood. Dhammaan codsiyada la xaqiijin karo ee macmiilku waa inay:
Ay baxshaan xog badan oo noo shlaysa inaan si dhab ah u xaqiijino inaad tahay qofka aan hayno Xogtiisa Shaqsiga ah ama wakiil sharci ah oo ka socda qofkaas; IYO
Inay qeexaan codsigaaga si fahfaahsan taasoo noo sahlaysa inaan si sax ah u fahano, u qiimayno, aana uga jawaabno codsiga.
Kama jawaabi karno codsigaaga ama kuma siin karno Xogtaada Shaqsiga ah haddii aanaan xaqiijin karin aqoonsigaaga ama awooda aad u leedahay samaynta codsiga aanana xaqiijin inaad leedahay Xogta Shaqsiga ah. Waqxaan u adeegsan doonaa Xogta Shaqsiga ah ee lagu baxshay codsiga la xaqiijiyay ee macmiilka inaan hubino aqoonsiga ama awooda sharci ee codsadaha si uu codsiga usoo gudbiyo. Waxaan la hari karnaa qaybo kamid ah Xogtaada Shaqsiga ah muddo kooban qaab ka badan qaybaha kale. Sidas awgeedna, kuma siin karno Xogta Shaqsiga ah ee aad codsanayso haddii aanaan ba hayn. Fadlan arag qaybta Xeerka Arimaha Shaqsiga ah ee ciwaankeedu yahay “Xogta Isticmaalaha ee ay soo aruurisay Kiosk” si aad u hesho faahfaahinta mudada aan haynayno xogta.
Xaq Uyeelashada Takoor La’aanta
Kuguma takoorayno inaad ku dhaqanto xaquuqdaada CCPA. Ilaa in sharciga CCPA ogolaado maahee, kuuma:
Diidi doono badeecooyin ama adeegyo;
Kuma saarayno qiimayaal ka duwan ama qarshaadka badeecooyinak ama adeegyada aan siin dadka kale, ayna ku jiraan bixinta qiimo dhimisyo ama gunooyin kale, ama soo rogista lacago ganaax ah;
Kuma siinayno heerama tayo kaduwean dadka kale ee badeecooyinka adeegyada; AMA
Ma soo jeedinayno inaad hesho qiimo ka duwan ama qarash ku aadan badeecooyinka ama adeegyada ama heer ama tayo kaduwan kuwa dadka kale ee badecooyinka ama adeegyada.
Fadlan ogoow in dabiicada caadiga ah ee qaybaha qaarkood iyo adeegyada Kiosk ay bixiso ayaa u baahan kara Xogta Shaqsiga ah si loo adeegsado. Inaad diido bixinta Xogta Shaqsiga ah Qaarkeed, ma awoodi doontid adeegsiga dhammaan unugyada ay bixiso Kiosk.
English Español 中文 عرب Somali Portugues Française Italiana 日本人 한국어 Bosnian German